I-imeyili kanye Nezindaba Zomphakathi Jugalbandi | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 20, 2014 Douglas Karr
Sisanda kushicilela i- inkambo yokuphahlazeka engenayo enikezela ngama-imeyili ama-5 athunyelwa masonto onke (bhalisela kuthebhu ku- agency indawo). Olunye uchungechunge lwama-imeyili lugxila ngokuphelele ekukhangisweni kwe-imeyili, esikubhekisa kunethiwekhi yanoma yimuphi umzamo wokukhangisa ongenayo. Ithimba lokudala ku Izindela ze-imeyili bakhiqize le infographic ekhombisa ukuhlangana… noma jugalbandi… kwe-imeyili kanye nomphakathi nokuthi lezi ziteshi zombili zisekelana kanjani.
I-jugalbandi noma i-jugalbandhi idlalwa kumculo wakudala waseNdiya, ikakhulukazi umculo wakudala waseHindustani, oqukethe i-duet yabaculi ababili bodwa. Igama elithi jugalbandi lisho, ngokwezwi nezwi, “amawele ahlanganisiwe.” I-duet ingaba yizwi noma insimbi.
Ngiyawuthanda umbono wamawele aboshelwe uma kukhulunywa ngokukhangisa nge-imeyili futhi noma yiliphi elinye isu lokumaketha! Angiqiniseki kangako ngoShakira noBeyonce, ngicabanga ukuthi i-imeyili nomsindo wezenhlalo ungcono kakhulu. Chofoza ukuze uthole umbono ogcwele we-infographic.
Tags: beyonceimeyilijugalbandishakirasocial media